हाम्राे पिपलबाेट » रामजानकी मा.वि. प्रति ऋणी छौं : पूर्व विद्यार्थी रामजानकी मा.वि. प्रति ऋणी छौं : पूर्व विद्यार्थी – हाम्राे पिपलबाेट
रामजानकी मा.वि. प्रति ऋणी छौं : पूर्व विद्यार्थी
२०४२ सालका बाँकेको कोहलपुर स्थित राम जानकी माध्यामिक विद्यालयको स्थापना भएको हो । झण्डै ३६ वर्ष पहिले स्थापना भएको उक्त विद्यालयले आफ्नो ३६ औँ स्थापना वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापना कालदेखी विभिन्न चुनौतीका बाबजुत विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गरी दक्ष जनशक्ती निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका उक्त विद्यालयले खेलेको छ । २०४२ सालमा पूर्व प्राथमिक तहबाट शुरु गरिएको विद्यालय अहिले कक्षा १२ सम्म विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउन सफल भएको छ । हाल उक्त रामजानकी माध्यामिक विद्यालयमा झण्डै ६ सयको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु अध्यापन गर्छन भने ४२ जना शिक्षक स्टापहरुको संख्या रहेको छ । कम्प्युटर साइन्स, म्यानेजमेन्ट, शिक्षा विषयहरु विद्यार्थीहरुलाई अध्यापन गराउँदै आएको छ । ३६ वर्षको अन्र्तरालमा उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु अहिले सरकारी सेवाको उच्च पदमा जागिरे जीवनमा आवद्ध छन् । हामीले रामजानकी माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरी सरकारीसेवा र विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध भई राष्ट्र सेवामा लागिपरेका तिनै विद्यार्थीहरुको अनुभव टेलिफोन सम्पर्कबाट लिएका छौं ।
ई. भरत रेग्मी
(हाल नेपाल आयल निगम
थानकोट कार्यालयको कार्यालय प्रमुख)
मेरो घर बर्दिया जिल्ला बढैयाताल गाउँपालिकामा पर्दछ । हाल म नेपाल आयन निगमको कार्यालय थानकोट कार्यालय काठमाण्डौंमा उपसचिवको पदमा कार्यरत छु । विगत २०५४ सालदेखी म रामजानिक माध्यामिक विद्यालयको छात्र हुँ । करिब ५ वर्ष सम्म मैले उक्त विद्यालयमा अध्ययन गर्न मौका पाए । सोही अवसरमा रामजानकी माध्यामिक विद्यालयक कोहलपुर–१० का सम्पूर्ण शिक्षकहरु मेरो लागी ऋणी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको माया ममता र विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र हाम्रो भविष्यका लागि निकै चिन्ता गर्नुहुन्यो । विद्यालयमा अध्ययनरत गर्दाका समयमा हामीबाट कयौँ कमिकमजोरी हुन्थे तर विद्यालयका शिक्षक र शिक्षिकाहरुले देखाएको राम्रोबाटोमा हिडने मेरो लक्ष्य अनुसार आज जुन ठाँउमा त्यसको पहिलो भुमिका र जिम्मेवारी मेरो शिक्षक गुरु, गुरुआमाको नै थियो । अहिले सम्झदा लाग्दा विद्यालय परिवारले हाम्रो भविष्यको लागी निकै ठूलो मेहनत गरेको थियो । बाल्यकालमा पढनुपर्छ र भविष्यलाई सहि बाटो डो¥याउनुपर्छ भन्ने त्यो कलिलो उमेरमै कम ध्यान हुदो रहेछ । जेहोस मलाई लाग्छ ३६ वर्ष पहिले बाँकेको कोहलपुरमा स्थापनाको राम जानकी माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययरत ति पुराना साथीभाईहरुलाई सम्झदै विद्यालयको थप प्रगतीको शुभकामना दिन चाहान्छु । विद्यालयले अझै बाँके जिल्लाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा प्रगती गर्दै जाहोस मेरो शुभकामना ।
(हाल अष्ट्रेलिया )
नमस्ते म प्रचण्ड पाठक हाल अष्ट्रेलियामा अनुसन्धानकर्ताको रुपमा काम गरिहेको छु । मेरो घर कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० विद्युतरोडमा हो । सबैभन्दा पहिले मलाई कलम समाउन सिकाउने तिनै गुरुहरुलाई सम्झन चाहान्छु । अष्टे«लियाबाट सम्झदै आज मैले अध्ययन गरेको विद्यालय ३६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । उक्त विद्यालय परिवार हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । विद्यालय स्थापना गरि विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक उज्यालो दिने ति महान समाजसेवी, समाजका अगुवा, शिक्षाप्रेमीहरु प्रतिलाई सम्झ्न चाहान्छु । नर्सरी देखी १३ वर्ष सम्म मैले उक्त विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर मिलेकोथियो । विद्यालयमा अध्ययन गर्दै गर्दा शिक्षक स्टापहरुले दिएको माया,ममता र तिनै गुरुहरुको आर्शिषबाद मेरोलागी सधै ऋणी छु । समयको अनुकुल संगै उक्त विद्यालयबाट एसएलसी अध्ययनगरी हामी बिदाई भएका थियौँ । संगै एउटै कोठामा अध्ययन गरेका ती साथीभाईहरु लागी मेरो सम्झना छ । ३६ वर्षको यो लामो समयमा विद्यालयले थुप्र्रै चुनौतीहरु सामना गरेको होला । थुप्रै विद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको उज्यालो दिएर बिदाई गरेको छ । आज तिनै विद्यार्थीहरु राज्यको कर्णधारको रुपमा खडा भएका छन् । रामजानकी माध्यामिक विद्यालयलाई आगामी दिनमा थप प्रगतीको पाइला चाल्दै जाहोस मेरो शुभकामना छ । हाल अध्ययनरत सम्पूर्ण मेरा प्यारा भाइबहिनीहरुलाई सम्झ्दै उहाँहरुको पनी उज्वल भविष्यको कामना गर्दछु ।
प्रध्यानाध्यापक (कोहलपुर ई.मि.स्कुल)
नमस्ते मेरा नाम खोमराज रमाली हो । म. कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० रामनगरमा बसोबास गर्दछु । हाल कोहलपुर इङ्गलिस मिडियम स्कुल टाउन पलानिङ्ग कोहलपुरको प्रध्यानाध्यापकको रुपमा आवद्ध छु । २०५३ सालमा राम माध्यामिक विद्यालयबाट बिदाई भएको थिए । मैले अध्ययन गरेको कोहलपुर स्थित राम जानकी माध्यामिक विद्यालयको आज ३६ औँ जन्मदिन परेको
रहेछ । विद्यालयको स्थापना दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण विद्यालय प्रति चिन्ता र चासो राख्नुहुने महानुभावहरु प्रति धन्यवाद तथा बधाई व्यक्त गर्न चाहान्छु । उक्त राम जानकी माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययन गरेर आज जुन ठाँउमा आवद्ध छु यसको शेय रामजानकी माध्यामिक विद्यालयलाई जान्छ । कुनै जमाना थियो । धुलौटो पाटीमा अक्षर कोरेर सिकाइन्थ्यो । त्यसपछि खरीपाटी आयो । लामो समयसम्म विद्यालयमा राजगरेको कालोपाटी पनि विस्तारै विस्थापित हुँदै गएको छ । त्यसको स्थान अहिले सेतोपाटी र हरियोपाटीले लिन थालेका छन् । त्यति मात्रै नभई विद्यालयमा अहिले स्मार्टबोर्ड र प्रोजेक्टरको माध्यमबाट समेत पढाइ हुन थालेको छ । धूलोट, सिलोट, दूधेखी, खरी घोटेर वा हरिया पात र अँगार पिसेर बासको कलमले कालोपाटीमा लेखेको इतिहास अब पुराना भइसकेका छन् । पढाइमा प्रविधिको प्रयोगले शिक्षक र विद्यार्थीको सिकाइ प्रणालीलाई सहज त बनाएको नै, साथसाथै सिकाइ स्तरलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणसमेत गरिदिएको छ । विद्यालयहरुमा ई–क्लास, भर्चुअल क्लास, हरियो बोर्ड, टेक्नो ल्याब, स्मार्ट बोर्ड, ई–पाटी लगायतका प्रविधिहरु भित्रिएका छन् । पहिले जस्तो कालोपाटीमा चकले घडी र गाई बनाएर सिकाउने चलन बदलिँदै गएको छ । अब गाई र घडीकै तस्बिर र भिडियोबाट पढाउन थालिएको छ । पढाइमा प्रविधि एकदमै आवश्यक छ ‘विद्यार्थीले प्रविधिबाट अनुसन्धान गरेरै सिक्ने हुनु पर्छ । माछा मारेर दिने होइन, माछा मार्न सिकाइदिने हो । पाठ्यक्रममा आधारित भएर प्रविधिको प्रयोग गरेर सिकाउने हो ।’ उक्त विद्यालयबाट बिदाई भएतापनी विद्यालयको माया ममता र स्नेह सधै रहीरहनेछ । समाज परिवर्तन संगै विद्यालयको प्रगितीका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
डा. सन्देश घिमिरे
( हाल अमेरिका)
(कम्प्युटर सफ्टवयेर इन्जिनियर)
नमस्ते मेरो नाम सन्देश घिमिरे । मेरो घर कोहलपुर नगरपालिका वडा नं १० मा हो । हाल म कम्प्युटर सफ्टवयेर इन्जिनियरमा आवद्ध छु । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० मा रहेको रामजानकी माध्यामिक विद्यालयको कक्षा १ देखी १० सम्म अध्ययरत छात्र हुँ । करिब १० वर्षको रामजानकी माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने शुभअवसर मिलेको थियो । अहिले जस्तो पढनका लागि सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्री प्रविधिहरु कमै मात्र थिए तरपनी विद्यालयमा आवद्ध शिक्षक स्टापहरुको हरवखत गरिएको मेहनेत र हामी विद्यार्थीहरुले गरेको मेहनेतले हामी यो स्थान सम्म आइपुगेका छौं । रामजानकी माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत साथीभाईहरु अहिले कोही सरकारी जागिरेमा आवद्ध छन् भने कतिपय साथीभाईहरु सुरक्षा निकायको माथिल्लो पदमा आवद्ध छन् । शिक्षक स्टापहरुको कडा मिहनेत र त्यसमा हाम्रो पनि मेहनेतले हामी आज आफ्नो भविष्यलाई सफल बनाउन सकेका छांै । रामजानकी विद्यालयमा अध्ययनरत पूराना दर्जनौ दक्ष विद्यार्थीहरुलाई उत्पादन गरिसकेको छ । आगामी दिनमा विद्यालय अझै प्रगतीको बाटोमा लम्कि रहोस, विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ ३६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेकोमा विद्यालय परिवारमा आवद्ध सम्र्पूण शिक्षक, शिक्षीका, र हाल अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीभाईबहिनीहरुमा उज्वल भविष्यको कामना गर्दछु ।
ई. भुपाल वली
नमस्कार मेरो नाम भुपाल वली हाल.म अष्टे«लियामा कम्प्युटर इन्जिनियरको पदमा काम गर्दै आइरहेको छ । मेरो घर बाँसगढी बर्दिया हो । राम माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखी १० कक्षा सम्म २०४९ सालमा विद्यालयमा भर्ना भएको थिए । उक्त विद्यालयमा भर्ना भएपछी २०५४ सालमा उक्त विद्यालयबाट एसएलसी दिएर बिदाई भएको थिए । करिब ६ वर्षको अन्र्तरालमा विद्यालयले दिएको शिक्षा दिक्षा मेरो लागी कर्मको फल बनेको छ । कक्षा ६ देखी निरन्तर मेरो पढाईका लागि हर बखत चिन्ता लिनुहुने मेरो गुरुहरु मेरो गुरुआमाहरुलाई बिरानो मुलुक अष्ट्रेलियाबा सम्झीरहेको छु । विद्यालयले आज ३६ औँ वर्षमा पाइला टेकेको खबरले निकै खुसी र हर्ष लागेको छ । यो सुखद खबर प्रदान गरिदिनुहुने मेरो शिक्षक गुरुहलाई धेरैधेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु । शैक्षिक दियो बाल्ने मेरो विद्यालय राम जानकी माध्यामिक विद्यालयले अझै आगामी दिनमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने छ भन्ने आशा लिएको छु । विद्यालयमा अध्ययरत रहँदा कोहलपुरमा रहेका अन्य विद्यालयहरु संग हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएका थियौँ भने शैक्षिक गुणस्तरमा कुनै कमी थिएन । अन्र्तमा सम्र्पूण संगै पढेलेखेका ती साथीभाईहरुलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई सम्झना गर्दै विद्यालयको थप प्रगतीको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद
३ माघ २०७७ मा प्रकाशित